खुसिकाे खबर; नेपालमा को- रोना सङ्क्रमण ६० प्रतिशतले घट्यो, यस्ताे छ तथ्यांक ! - Info Nepal
INFONPLसमाचारखुसिकाे खबर; नेपालमा को- रोना सङ्क्रमण ६० प्रतिशतले घट्यो, यस्ताे छ तथ्यांक !
खुसिकाे खबर; नेपालमा को- रोना सङ्क्रमण ६० प्रतिशतले घट्यो, यस्ताे छ तथ्यांक !
खुसिकाे खबर; नेपालमा को- रोना सङ्क्रमण ६० प्रतिशतले घट्यो, यस्ताे छ तथ्यांक ! नेपालमा को- रोना भाइरसको सङ्क्रमण ६० प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्राययका प्रवक्ता डा। कृष्णप्रसाद पौडेलले एक महिनाका बीचमा ६० प्रतिशतले सङ्क्रमण घटेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार भदौको पहिलो साता ४० हजार ३३८ जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेकामा अहिले असोजको पहिलो साता त्यो सङ्ख्या १५ हजार ९४२ पुगेको छ । उहाँले यो सङ्क्रमणमा उल्लेख्य कमी देखिएका कारणमध्ये को- रोना भाइरस विरुद्धको खोपको पनि योगदान रहेको बताउनुभयो । शनिबार मात्र १२ हजार ३१ जनामा को- रोना परीक्षण गर्दा ७६० जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो ।
अहिले कूल परीक्षणमा ७ प्रतिशत मात्र सङ्क्रमण देखिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । हिजो सक्रिय सङ्क्रमित १५ हजार ३४० जना रहेका थिए । पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने जिल्लामा मोरङ्, सुनसरी, झापा, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र रुपन्देही रहेका छन् । नेपालमा सङ्क्रमण दर १८.७ प्रतिशत र सङ्क्रमणमुक्त हुने दर ९६.७ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै नेपालमा को- रोना भाइरस विरुद्धको खोप लक्ष्यअनुसार लगाएको पाइएको छ ।
असोज मसान्तसम्म कूल जनसङ्ख्याको ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म पहिलो मात्रा ४० प्रतिशत र पूर्णमात्रा ३२ प्रतिशतलाई लगाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
१८ वर्षभन्दा माथिका दुई करोड १७ लाख ५६ हजार ७६३ जनालाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा पहिलो मात्रा ८१ प्रतिशत र पूर्णमात्रा ७४ प्रतिशतलाई लगाइएको छ । यस्तै उपत्यकामा १७ लाख ४५ हजार ५७० जना र पूर्ण मात्रा १७ लाख ७९ हजार ८९७ जनालाई लगाइएको छ ।
उपत्यकामा १८ बर्षमाथिका २१ लाख २९ हजार ७७३ जना रहेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म सङ्क्रमणमुक्त हुने नागरिक सात लाख ७५ हजार ७२ जना छन् भने सङ्क्रमणबाट ११ हजार २२१ जनाको नि- धन भइसकेको छ । हाल देशभर ३१७ जना सघन उपचार कक्ष -आइसीयू-, ११३ जना भेन्टिलेटर, १४ हजार १६८ जना होम आइसोलेशन, एक हजार १७२ जना संस्थागत आइसोलेशन र २३६ जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् ।